USA inomisa kuenda kuUK nekuIreland
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » USA inomisa kuenda kuUK nekuIreland
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • LGBTQ • nhau • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • US Virgin Islands Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
United States ichamisa kufamba kwendege kubva kuUK neIreland kuwedzera kune mamwe gumi nematatu masuo eEuropean izvo zvino zvinosanganisira nyika dzese dzeSchengen pamwe neSwitzerland nedzimwe nyika dzeEurope. naizvo. Mutungamiri anosanganisira vese vatorwa vanga vari muEurope mumavhiki maviri apfuura.
Izvi zvichaiswa munzvimbo seMuvhuro. Vagari vemuUS, vagari vechigarire, uye vamiriri vacharamba vachibvumidzwa kudzokera kuUnited States uye vachazodikanwa kwevhiki mbiri yekuparadzanisa mushure mekuuya.
Panguva imwecheteyo, purezidhendi akati hurumende ichatsigira kambani yendege, cruise uye indasitiri yehotera
Mutungamiri weAmerica VaTrump vazivisa uyu mutemo mutsva pasi peChikamu 212 (f) Mugovera.
Chikamu 212 (f) cheImmigration uye Nationality Act (INA) chinopa Mutungamiriri weUnited States masimba akawandisa ekumisikidza miganho yekuenda kune dzimwe nyika nekuzivisa. Mutemo uyu unobvumidza Mutungamiriri kumisa kupinda kwevamwe vatorwa kana kirasi yevatorwa kana nzvimbo dzekurambidzwa pakupinda kwekirasi yevatorwa kwenguva pfupi kana akaona kuti kupinda kwevatorwa vakadaro kungave kunokanganisa kufarira kweUS.
Kuitira kudzora kupinda kwevamwe vatorwa kana kirasi yevatorwa pasi pechikamu 212 (f), Mutungamiriri anofanirwa kuona kuti kupinda kweavaenzi kana boka revatorwa muUnited States “kunokanganisa zvido zveUnited States. . ” Kana Mutungamiriri akaita izvi, anogona kupa chirevo chinomisa kana kumisa kupinda kwevatorwa kubva mukirasi yakadaro.
Chikamu 212 (f) chinopa mutungamiriri wenyika mvumo yekumisa kana kudzora kupinda kwevamwe vatorwa kana boka revatorwa "kwenguva yaanoona zvakakodzera." Naizvozvo, chikamu 212 (f) hachiise chero ganhuriro pane iyo nguva yekumiswa kana kurambidzwa.
Chikamu 212 (f) chinopa Mutungamiriri sarudzo mbiri maererano nekupinda kwekirasi yevaenzi iyo yaakatsunga kuve inokanganisa zvido zveUnited States. Kutanga, Mutungamiriri anogona Suspend kupinda kwevatorwa vakadaro "sevatorwa kana vasiri vanobva kune dzimwe nyika." Neimwe nzira, pane Suspend kupinda kweavaenzi vakadaro, Mutungamiriri anogona kuisa zvirambidzo pakupinda kwevatorwa sezvaangaona zvakakodzera.
Iyi inyaya iri kubuda uye ichapedziswa.
Mhosva yekutanga yeCOVID-19 yakataurwa muTonga
Brexit izere kukanganisa pakufamba kwepasirese haina ...